Mmụta Ọ̀ Bụ Azịza Ya? | Martech Zone
Ajụrụ m ajụjụ na Jụọ 500 ndị mmadụ nke ahụ nwetara nzaghachi na-adọrọ mmasị. Ajuju m bu:
Collelọ akwụkwọ kọleji hà bụ usoro ahaziri nke na-esite n'otu ọgbọ gafere n'ọzọ?
Nke mbụ, ka m kọwaa na m kwuru okwu a iji kpalite nzaghachi - akpọrọ ya njikọ-baiting ọ rụkwara ọrụ. Fọdụ nzaghachi m natara bụ nke enweghị nkwanye ugwu, mana nhọpụta niile bụ ihe nwere mmetụta.
Rute ugbu a, 42% nke ndi nhoputa ndi ochichi ekwuola ee!
Na m jụrụ ajụjụ ahụ apụtaghị na ọ bụ echiche m - mana ọ bụ nchegbu maka m. Rute ugbu a, nwa m nwoke ahụmahụ na IUPUI dị ịtụnanya. Ọ bụ onye isi na Math na Physics onye tinyegoro nnukwu nlebara anya site na ịme mmekọrịta yana ịkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ. Ndị prọfesọ ya amawo ya aka ma nọgide na-eme ya. Ha gosiputara ya umu akwukwo ndi ozo ndi n’emekariri akwukwo ha.
Na telivishọn na mkparịta ụka n'ịntanetị, ana m anọgide na-anụ ka a na-ezo aka na agụmakwụkwọ mmadụ na ikpebi ọtụtụ ikike na ahụmịhe mmadụ. Mmụta ọ na-egosi ikike? Ekwenyere m na agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-enye mmadụ ihe atọ dị mkpa:
Ike zuru ezu a ogologo oge mgbaru ọsọ. Afọ anọ nke mahadum bụ ihe dị ịtụnanya na-enweghị atụ ma na-enye ndị were gị n'ọrụ ihe akaebe na ị nwere ike nweta yana ịnye onye gụsịrị akwụkwọ obi ike na ikike ya.
Ohere iji mee ka ihe omuma gi di omimi na ahụmịhe, na-etinye uche na isiokwu ị họọrọ.
Insurance. Akara mahadum na-enye ọtụtụ mkpuchi maka inweta ọrụ ruru eru na ezigbo ụgwọ.
Nchegbu m n’ebe agụmakwụkwọ dị bụ na ọtụtụ kwenyere na agụmakwụkwọ na-eme ka mmadụ ‘mara ihe’ ma ọ bụ nye ha ikike karịa ndị na-agụghị akwụkwọ. Enwere otutu ihe omuma n’akụkọ ihe mere eme ebe ndị gụrụ akwụkwọ ridic kwara ndị ndú chere ọchị ruo mgbe ha gosipụtara dị iche. A na-emeso ha dị ka ndị ọzọ, ọ bụghị iwu. Otu okwu na ajụjụ ahụ kwuru ya n'ụzọ zuru oke:
Ọ dị ka mmegbu, ma ọ bụghị nkwupụta, na-afọ nke nta ka 'a manyere ya' n'ọtụtụ ọnọdụ. Ngosipụta dịgasị iche iche, na ọkwa niile, bụ akụkụ 'ihe ọchị' nke agụmakwụkwọ mahadum. Nye m, ngosipụta a bụ ihe mmụta agụmakwụkwọ kwesịrị ịbụ. M na-eche na PC nwee / na-egbochi oke echiche efu.
Billionaires na Mmụta
Mark Zuckerberg bụ ọdụdụ nwa ga - eme ndepụta aha billionaire Forbes. Lee ihe ndetu mara mma na Zuckerberg:
Zuckerberg gara Mahadum Harvard ma debanye aha na klas nke 2006. Ọ bụ onye otu òtù Alpha Epsilon Pi. Na Harvard, Zuckerberg nọgidere na -emepụta ọrụ ya. Ya na Arie Hasit biri. Ihe omume mmalite, Coursematch, nyere ụmụ akwụkwọ ohere ịlele ndepụta nke ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ debanyere aha na otu klaasị. Emechaa oru ngo, Facemash.com, bu ebe ihe nlere anya di ka Harvard Hot ma ọ bụ.
Otu ụdị saịtị ahụ dị n'ịntanetị ruo awa anọ tupu ndị ọrụ gọọmentị kagburu ịntanetị Zuckerberg. Ngalaba na-ahụ maka kọmpụta wetara Zuckerberg n’ihu Adminlọ Ọrụ Nlekọta Mahadum Harvard, bụ ebe e boro ya ebubo na ọ dara iwu nchekwa kọmputa na imebi iwu na nzuzo Internetntanetị na ihe ọgụgụ isi.
Nke a bụ nwa akwụkwọ na otu mahadum kachasị ama ama na mba ahụ gosipụtara ikike ịchụ nta ego. Nzaghachi nke mahadum? Ha nwara imechi ya! Daalụ maka ịdị mma maka Mark na ọ gara n'ihu na mbọ ya ma hapụ ka ntọala ahụ kwụsị ya.
Anyị Na-akụzi “Olee” vs “Kedu” Iche echiche?
Deepak Chopra jụrụ ajụjụ na Seesmic banyere Intuition. Agaghị m enye ajụjụ ya ikpe ziri ezi, Deepak Chopra nọ n'isi (n'echiche m dị ala) nke ndị ọkà ihe ọmụma na ndị ọkà mmụta okpukpe taa. O nwere echiche pụrụ iche banyere ndụ, eluigwe na ala, na njikọ anyị.
Otu nzaghachi nye Deepak bụ na agụmakwụkwọ onye ahụ nyere ya ikike ịkọwapụta ihe ndị dị na gburugburu ya iji nye ya 'nghọta'. Bụ na nsinammuo? Ka ọ bụ ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ ajọ mbunobi? Ọ bụrụ na ọgbọ na-akụzi otu ‘ihe akaebe’ na otu ụzọ esi atụgharị ndị na - agbanwe agbanwe - anyị na - ezi ndị mmadụ ihe otú na-eche? Ka obu anyi na-akuziri ndi mmadu ihe na-eche?
Enwere m ekele maka ohere m nwere ịga mahadum na nrọ m bụ na ụmụ m gụsịrị akwụkwọ na kọleji. Agbanyeghị, ana m ekpe ekpere ka ha gụkwuo akwụkwọ, agụmakwụkwọ ụmụ m anaghị eduga ha omume nke hubris. Agụmakwụkwọ dị oke ọnụ apụtaghị na ị mara ihe, ọ pụtaghị na ị ga-abụ ọgaranya. Echiche efu, nghọta, na mkpebi siri ike dịkwa ka agụmakwụkwọ dị ukwuu.
William Buckley, onye nwụrụ n’oge na-adịbeghị anya, kwuru otu oge, “Ọ ga - akara m mma ka aha mbụ 2000 na - achịkwa akwụkwọ ekwentị Boston karịa site na dons nke Harvard."
Tags: ogoEducationakara zuckerbergakara ahịastartupsmahadumwilliam buckley
Doug - Mpụga post !!
Adịghị m onye nwere mmasị na usoro agụmakwụkwọ anyị ugbu a. Ekwenyere m kpam kpam n'echiche ahụ na ọ bụ naanị otu ọgbọ na-agafe amaghị nke ọzọ.
Ekwenyere m na anyi kwesiri ikuziri anyi ka I Chere. A na-akuziri anyị nanị ka anyị na-echeta ma na-agụ.
Ee, mana Buckley gara Yale.
Ha! Nnukwu ihe, Clark!
Ọ bụ ezie na amaghị m otu US si ahazi ma nye ya usoro agụmakwụkwọ, enwere m nghọta banyere usoro UK. Ọ nzuzu ..
Agaghị abanye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana gọọmentị anyị ugbu a (http://www.labour.org.uk/education) chọrọ 50% nke afọ 18 iji nweta akara ugo mmụta na mahadum (http://en.wikipedia.org/wiki/Widening_participation)… Nsogbu a? Ọ lowers uru a ogo.
Dika ogo di otua abughi ihe efu, ya na ihe di nkpa iji nweta ihe kwesiri ekwenye, ka i wee muta PhD ma obu nna ukwu.
Ebumnuche nke ogo bụ inye ikike iji nweta ozi sitere n'ọtụtụ isi, wee gbanwee nke ahụ na nghọta. Ọ bụghị ihe ị mụtara, kama otu ị si eme ya.
Nke ahụ bụ ihe pụtara ìhè. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na mba nwetara ogo ha - mgbe ahụ, ogo na-aghọ nke kacha nta ọzọ. Ikekwe ọrụ ndị na-anaghị achọ ogo ga-achọ otu mgbe onye ọ bụla nwere otu.
Ọ bụrụ na i lee anya n’onwe gị ihe mere agụmakwụkwọ ka elu ji dị mkpa, ị ga-ahụ na o nweghị onye n’ime ha gụnyere ịmụ ka esi eche echiche.
Nke kacha nso bụ # 2, nke na-enye gị akụrụngwa iji chee echiche. Azịza nye ajụjụ Deepak Chopra nke ị kwuru bụ, echere m, na-ekwu maka nke a. Nghọta chọrọ akụrụngwa iji rụọ ọrụ. Ka ị na-amata ihe, otú ahụ ka o nwere ike ime.
Kọleji ọ bụ ụzọ gafere n'ọgbọ na-amaghị ihe ugbu a? Elere ya anya ọjọọ, ee. Anya nke ọma, ọ bụ ụzọ gafere n'ogo nke ihe ọmụma ugbu a. Y’oburu n’inwe obi uto, ichota ndi nkuzi na ndi nkuzi ndi n’ediri gi obi gabiga ihe omuma nke a
Maka ọtụtụ mmadụ, agbanyeghị, kọleji bụ ụlọ akwụkwọ azụmaahịa dị ebube, ụzọ isi mee njikọ nke ga-eme ka ọrụ ha gaa n'ihu, yana ọkara ụlọ n'etiti etiti nwata ruo ịbụ okenye.
Emeghị m ka ọ bụrụ ihe kpatara ya n'ihi na echeghị m na ọ bụ ihe a na-enweta na agụmakwụkwọ post-secondary nke oge a. Akwụghị m ụgwọ n’eziokwu mgbe m ga-akwụgo onye gụsịrị akwụkwọ na kọleji ka m na-akwụ onye gụsịrị akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ha nwere nka okike ndị achọrọ iji nwee ọganiihu n’ebe ọrụ taa.
Ekwuola m tupu achọrọ m ma ụmụaka m ga-enweta bachelor (opekata mpe); agbanyeghị, ekwenyeghị m na ị nweta diplọma ga-emesi ha obi ike. Naanị m kwenyere na ọ ga-eme ka ha ghara ịda mba.
I kwuru okwu anwansi: creativity
Iji echiche / ihe okike mee ihe nke oma bu uzo imuta ihe na icheputa ihe ma nke ahu adighi aru akwukwo. Mana echere m na nke kachasị, anyị ga-amụta ileghara mmetụta ndị na-adịghị mma anya nke na-egbochi ụzọ maka echiche ziri ezi nke na-egbochi ụzọ iji rụọ ọrụ kwesịrị ekwesị / nke ọma.
Ekwerela m na ihe kacha baa uru mmadụ nwere ike ịpụ na kọleji bụ ihe agụghị. Echere m na ihe kachasị mma iji gaa kọleji bụ ịsọ mpi na imekota na ndị ọgbọ, ụlọ akwụkwọ ka mma ọfụma ndị ọgbọ ka mmadụ na-agba mbọ ruo ogo ndị ọgbọ ha. Karịsịa mgbe ndị ọgbọ ahụ nwere ike isi na ahụmịhe dị iche iche na / ma ọ bụ ọdịbendị dị iche karịa m.
Enwetara m ọtụtụ ihe karịa ịmụ ihe na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na iso ha na-eme ihe omume rụrụ arụ karịa akụkụ ọ bụla ọzọ nke kọleji.
O di nwute na enwere otutu ndi mmadu (~ 42%?) Na-atụ egwu kọleji, ọkachasị kọleji ka mma, n'ihi na ha na-amanye ụmụ akwụkwọ ịjụ ajọ mbunobi na echiche ha. Ọtụtụ ndị mmadụ ga - ahọrọ ikwere ihe ha chọrọ ikwere ma si otu a gbaa ndị ọzọ gburugburu bụ ndị na - egbochi echiche ụwa ha. E kwuwerị, ụzọ kachasị mma iji kwenye ihe mmadụ chọrọ ikwere bụ iji hụ na ọ nweghị ihe akaebe na - emegide ya.
Ọ bụrụ na anyị ga-aga n'ihu dị ka mba, dịka ụwa, dịka agbụrụ mmadụ, ndị mmadụ ga-agabiga mkpa a na-adịghị mma iji gbochie ihe ọ bụla megidere echiche ụwa ha na-ejighị n'aka. O di nwute, dabere na ihe m huru mere n'ime afo iri gara aga, adighi m enwe olile anya na otutu mmadu gha aghapu echiche ha nke oma ka nke a wee mee.
Mike - nke ahụ bụ ihe magburu onwe ya. Esi m na ezinụlọ dị iche iche, anyị bikwa mba niile - mana maka ọtụtụ, nke a bụ oge mbụ ndị etolite etolite na omenala ndị ọzọ gafere agbataobi ha.
Akwụghị m eziokwu na anaghị m enwekwa olileanya. Echere m na ndị mmadụ na-eji 'ifufe' eme ntuli aka ma ghara itinye echiche ọ bụla na ya ọzọ. Ndi otu abuo ndi mmadu emeela ihe omuma.
Echeghị m na ndị otu ya dị ka ndị mmadụ. Karịsịa ndị na-agbakọta na otu na ọdịmma pụrụ iche dị ka 501 (c) na "ndị na-eche echiche." Ọ gaghị agbanwe agbanwe rue mgbe ndị mmadụ tetara ma ghọta na a na-egwu ha maka pawns.
Akụkụ nke okwu m bụ na ndị mmadụ nwere echiche a gbanyere mkpọrọgwụ nke na ha na-arịọ ka emegharị ha. Ọ bụghị mmejọ ndị otu ahụ na-atụgharị uche n'echiche ndị mmadụ ma na-emegide ha na "ndị ọzọ" iji nweta ike ha. Ndi otu a ka mụtara ka esi emezu ebumnuche ha, ka a họpụta ha.
"Liberal" na "mgbanwe" bụ ụfọdụ akara ngosi dị ugbu a ebe otu dị iche iche na-achịkwa ndị mmadụ site na ikwusa echiche na mmụọ na-egosipụta ụfọdụ ndị ọzọ dabara adaba ma dị mfe nghọta na n'ọtụtụ ọnọdụ adịghị. Ndị a na-eji egwu na nkewa site n'okpukpe, agbụrụ, mmekọahụ, mmasị mmekọahụ, ọdịbendị, ọdịdị ala, ịhụ mba n'anya.
Mgbe m dị obere, anyị nwere “agha oyi” mana mgbe nke ahụ gachara, echere m na anyị nwere usoro ụwa ọhụrụ nke ga-arụ ọrụ na azụmaahịa ma biri n'udo. Chi m amaghi m.
Echere m na ị ga-enwe obi ụtọ ịhụ onye ọzọ nwere echiche a…
"… Ọdịbendị mba na-adịghị mma nke a na-enyefe dịka ọrịa sitere n'ọgbọ ruo n'ọgbọ site na usoro agụmakwụkwọ."
Naanị ịchọta nke a, ọ dịkwa mma!
Jul 6, 2009 na 4:38 PM
Chọtara edemede a mara mma: ọghọm nke Mmụta Ọzụzụ.